Naqshad Cajal ah sida loo sameeyo Abuur Ganaax ah Google Analytics
Google Analytics waa adeeg caan ah oo si fiican loo yaqaan oo kuu oggolaanaya inaad aragto faahfaahinta iyo dhammaan macluumaadka iyo weliba tirakoobka sida dadka isticmaala u dhaqmayaan boggaaga. Filimayaasha ku jira Google Analytics waa sahlan tahay in la sameeyo oo la abuuro waqti kasta. Halkan waxaad ka saari kartaa ama ku dari kartaa xogtaada falanqayntaada ee warbixinta ku saabsan. Tusaale ahaan, markaad abuurtay shaandhooyin ka baxsan dhowr IP-yada iyo hababka gudaha ee tifaftireyaashaaga, markaa waxaa jira fursado ah in filtarradaadu aysan si wanaagsan u shaqeynin oo loo beddelo sida ugu dhaqsaha badan. Waxaad abuuri kartaa shaandhooyin ka reebaya macluumaadka magaalooyinka ama waddamada gaarka ah - us vps unmetered bandwidth.
Ross Barber, oo ah Semtar Maamulaha Guusha Macaamiil, wuxuu sheegayaa in fayradaha ku jira Google Analytics, ay suurtagal tahay in qof walbaa uu ku daro ama ka saaro bogga gaarka ah, hubinta tayada aragtidooda iyo hits. Google Analytics wuxuu ku siinayaa fursado badan oo lagu qeexayo filtarradaada macluumaad muhiim ah oo faa'iido leh..Waad hagaajin kartaa goobaha aadna ka sii fiicnaan kartaa si aad u hesho natiijooyinka ugu haboon ee ku habboon.
Abuuri filti horey loo cayimay ama filim caadaysan
Si loo abuuro sifo horay loo cayimay ama shaandhada caadada ah, waa inaad u ogolaataa Google Analytics wakhti go'an si uu kuu diyaariyo warbixinno adiga kugu habboon. Tusaale ahaan, haddii aad heysato bog internet ah oo iibiya alaabada ilmaha laakiin aad rabto inaad aragto kaliya dalal ama magaalooyin gaar ah, ka dibna waa inaad ka saartaa meelo kale oo aad ku hagaajisid goobahaaga. Ma aha khalad in la yiraahdo sifooyinka gaarka loo leeyahay tiro badan oo xulasho iyo muuqaalada si ay u kala doortaan. Waxay kuu ogolaanayaan inaad soo saartid fiilooyinkaaga si aad uga saari kartid ama ku dari kartaa booqashooyinka ku saleysan daalacayaasha iyo goobaha, xawaaraha isku xirka, juquraafi, iyo astaamaha kale. Tusaale ahaan, haddii aad qabanqaabisay dhacdooyinka warbixinta maxaliga ah iyada oo loo marayo goobtaada, ka dibna waad ka sooci kartaa booqdayaasha magaaladaada ama magaaladaada si aad u hesho natiijooyin ku haboon.
Dooro badhanka raadiyaha ee nooca nooca filimada aad doorbideyso
Waa muhiim inaad xasuusnaato inaad had iyo jeer dooranayso raadiyaha raadiyaha noocyada kala duwan si aad u hesho natiijooyinka la rabo. Waxay ka mid yihiin oo ka saaraan ikhtiyaarrada kuu sheegaan xogta qaarkood, iyo waxaad diyaarin kartaa warbixinnada Google Analytics si waafaqsan. Haddii aadan rabin in qaar ka mid ah dalal ama magaalooyin gaar ah si ay u soo booqdaan bogaggaaga, waxaad si fudud u xiri kartaa cinwaankooda IP. Tani, waa inaad ku qortaa magaca magaalada ee qaybta faylka oo guji badhanka naafanimada. Waxaa intaa dheer, badhanka yar-yar iyo badhka ayaa kuu sheegi doona qaar ka mid ah xogta ay ku jiraan ama ka saaraan filtarrada. Haddii aadan rabin in qaar ka mid ah magaalooyinka aad ku socotid ama aad aragto websaydhkaaga, waxaad si fudud u xiri kartaa magaalooyinka adoo ku qoraya magaca qaybtaas. Doorashadani waxay faa'iido u leedahay dadka doonaya aragtida waddanka ku salaysan boggooda internetka waxayna doonayaan in ay hubiyaan in wax walba ay yihiin kuwo asal ah, dhab ah iyo illaa iyo calaamadda. Fursadaha "Raadinta iyo Bedelka" ayaa kuu oggolaanaya qaabka macluumaadkaaga lagu muujiyay Google Analytics. Waxaad qaybtan u qeybin kartaa qaybo kala duwan oo ku saleysan shuruudahaaga waxayna bedeli karaan filimka aan firfircooneyn ee kuwa firfircoon si loo helo natiijooyin sax ah oo sax ah.